Myanmar OA6: September 2007
ဗမာပြည်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို အလေးထားသော အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ သပိတ်မှောက်ကံဆောင် သံဃာတော်များကို ဂါဝရပြုရိုသေသောအားဖြင့်လည်းကောင်း အိုအေစစ်တွင် လူမှုရေးဆန်သောပို့စ်များ၊ အပြောင်အပျက်ဟာသများ၊ အချစ်ကဗျာများ၊ အဂါဝရဖြစ်စေသောပို့စ်များ တင်ဆက်ခြင်းကို ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ “ နိုင်ငံရေး ” ဟု ကင်ပွန်းတပ်ကြသော “အမိမြေ၏ပြည်တွင်းရေး ” နှင့်ဆက်ဆိုင်သောစာများ၊ သတင်းများနှင့် ခံစားချက်များသာ ရံဖန်ရံခါတင်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ လူအများ တိုင်းပြည်အတွက် ပူပန်နေချိန်တွင် ရယ်မောစရာများ အကြံထုတ်၍ Blog Times3ကိုလည်း တင်ဆက်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်သေးပါကြောင်း လေးစားစွာ တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 2:59 PM 1 comments
မနက် ၆ နာရီခွဲမှာ Alarm မြည်လာတာနဲ့ မထချင်ဘဲ လူးလဲထလာပြီး ရေချိုးခန်းဝင်၊ မျက်နှာသစ်လုပ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲပြန်လာတဲ့အထိ ဒီကောင်က အိပ်နေတုန်းပဲ။
“ ဟေ့ကောင် … ထတော့။ ၈ နာရီအရောက်သွားရမှာ။ မင်းကလည်း နေ့တိုင်းနှိုးနေရတာပဲ ”
ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က ပေတေပြီး ဆက်အိပ်နေတယ်။ ဒီကောင်ဆိုတာ ကျွန်တော့်စိတ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ကသာ အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်နေတယ်။ စိတ်က အိပ်ချင်ပြီး အိပ်နေတုန်းလေ။
“ မင်းသွားနှင့်ကွာ။ ခဏနေမှ ငါလိုက်လာမယ် ”
“ ပြီးရောကွာ … ”
ကျွန်တော်လည်း စကားမရှည်ချင်တာနဲ့ ရေချိုး၊ အဝတ်လဲပြီး ရုံးထွက်လာခဲ့တယ်။ ရုံးရောက်တော့ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေရတယ်။ ဟိုကောင်လာမှ အလုပ်လုပ်တာ ကောင်းတယ်လေ။ ၉ နာရီသာသာမှ ထုံးစံအတိုင်း ဖရိုဖရဲနဲ့ ဘာဂါတစ်လုံးကိုင်ပြီး ဝင်လာတယ်။
“ ကဲ … အလုပ်စရအောင်ကွာ။ မင်းကလည်း နောက်ကျလိုက်တာ ”
သူ့ပြောတာမဟုတ်သလိုနဲ့။ ဘာဂါထဲက ဆလတ်ရွက်ကို ရွေးပြီးကိုက်နေသေးတယ်။ ပြီးတော့ ပြောလိုက်သေးတယ်။
“ နေဦးကွာ … ညက ဘောပွဲအဖြေလေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ငါးမိနစ်ပဲစောင့် ”
ဒါနဲ့ အလုပ်မစရသေးပြန်ဘူး။ မန်နေဂျာက ကြည့်လှပြီ။ ခဏနေတော့မှ အလုပ်စတယ်။ လုပ်နေကြ အလုပ်တွေပေမယ့် စိတ်နဲ့လူနဲ့ကပ်မှ လုပ်လို့ကောင်းတယ်လေ။ နှစ်ရာရီလောက်ကြာတော့ ဖောက်လာပြန်ရော။
“ မင်းခဏလုပ်နေကွာ။ ငါချစ်သူဆီကို စာရေးမလို့။ မန်နေဂျာ မမြင်ပါဘူးကွာ။ မပူပါနဲ့ ”
ဒီကောင် ပြောနေရင်း Gmail ကိုဖွင့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုစာရွက်ရှာသလိုလို၊ ဒီဖိုင်ဖွင့်သလိုလိုနဲ့ ကာထားပေးရတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ချစ်သူဆီ စာရေးဖို့ရှိနေတာကို။
“ ဟေ့ကောင်ရေ - ချစ်သူ Online မှာ ရှိတယ်ကွ။ အဟဲ … မင်းအလုပ်ဆက်လုပ်နေကွာ။ မင်းဘာပြောချင်လဲ။ ငါပြောထားပေးမယ် ”
“ အေးကွာ … သတိရကြောင်းပေါ့ ”
ကျွန်တော်လည်း ချစ်သူဆိုတာနဲ့ အလိုတူဖြစ်ပြီး မော်နီတာကိုပဲ ကြည့်နေဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်တော့ မသိဘူး။ နောက်က မန်နေဂျာက “ Chatting ဝင်နေတယ်ပေါ့ ” လို့ လာအော်မှပဲ သတိဝင်တော့တယ်။ ခါးထောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ မန်နေဂျာ မိန်းမဝဝကြီးကို စကားပြန်မလို့ စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ အဲဒီကောင်က ခေါင်းသွားခေါက်ပြီး
“ ချစ်သူနဲ့တော့ စကားပြောချင်တဲ့ လူတွေချည်းပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာဦး ”
လို့ နားရွက်နားကပ်ပြီး အော်တယ်လေ။ တော်သေးတယ်။ မကြားလို့။
“ ဟေ့ကောင် - လာကွာ။ အလုပ်ကူလုပ်တော့။ မဆိုင်တာတွေ နားမှလုပ်တော့ ”
ဒီလိုပြောမှ ဒီကောင်လည်း မှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့ အလုပ်ဝင်လုပ်ပေးတယ်။ ထမင်းစားနားတော့ ကျွန်တော်က အနီးအနားက တရုတ်ဆိုင်မှာ စားမလို့လုပ်နေတုန်း သူက
“ ဟင်းတွေက ဒါတွေပဲ ထပ်နေတယ်။ မင်းဒီမှာစား၊ ငါ CityHall ဘက်သွားပြီး ဗမာစာ စားလိုက်ဦးမယ်။ တစ်နာရီဆို မီပါတယ်။ ပြန်လာမယ် ”
လို့ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ထထွက်သွားပြန်တယ်။ ခဏနေတော့ ဖုံးလာတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက္ဘ်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေလို့ နာရီဝက်လောက်ကြာမှ လိုက်ခဲ့မယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ရုံးပေါ်ပြန်တက်ပြီး အလုပ်စားပွဲမှာ ထိုင်နေလိုက်တယ်။ စိတ်မပါဘဲ လုပ်ရင်မှားမယ်လေ။ ဒီကောင်ပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာ လက္ဘ်သုတ်အထုပ်လေးနဲ့။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဆိုးပြေသွားတယ်။ စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ကပ်ပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်တော့ အလုပ်တော့တွင်သားပဲ။ ညနေ ရုံးဆင်းတော့ လမ်းလျှောက်ရင်း ဒီကောင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။
“ ဟေ့ကောင် … မင်းကတော့ တယ်လွတ်လပ်ပါလားကွာ။ ငါသာ ရုံးသွားလိုက်၊ အိမ်ပြန်လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်နေတာ ”
“ အေး … မင်းက လိုက်လျောညီထွေမှ မနေတတ်ဘဲ။ အပူတွေ ခေါင်းအုံးအိပ်တာကိုကွ။ ငါ့လို ပျော်ပျော်နေစမ်းပါ။ အလုပ်ချိန်လေး လုပ်လိုက်၊ အခြေအနေကြည့်ပြီး အနားယူလိုက်ပေါ့ကွာ။ အခုလည်း ငါဘီယာသွားသောက်မလို့ ”
“ အမ် … မဖြစ်ဘူးလေ။ မနက်ဖြန် ရုံးတက်ရမှာ။ မသောက်နဲ့တော့ကွာ။ ငါပါရောပြီး နံနေမယ် ”
“ မသောက်ပါဘူးကွာ။ မင်းကို စမ်းလိုက်တာ။ တကယ်တော့ အလုပ်ချိန်ပြင်ပဟာ မင်းကိုယ်ပိုင်ဘဝပဲ။ သောက်လည်းရတယ်။ က နေလည်းရတယ်။ အခုမင်းက မင်းဘဝတစ်ခုလုံး အလုပ်လို့ တွေးနေတာကိုကွ။ အလုပ်ချိန်မှ မဟုတ်ဘဲ။ သောက်တော့ ဘာဖြစ်လဲ။ မနက်ဖြန် အချိန်မီ ရုံးရောက်ရင် မပြီးဘူးလား ”
“ ဟိုဒင်းလေ .. အဲ … ဟုတ်သားပဲနော် ”
“ မဝေးစမ်းပါနဲ့ကွာ။ အလုပ်ရှိလို့ စောစောအိပ်တယ်တို့၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေး စားလို့မရဘူးတို့ ဆိုတာ ဘဝကို ပိုက်ဆံနဲ့လဲနေတဲ့လူတွေကွ။ လူပဲကွာ … လူနဲ့တူအောင်နေရမယ်။ လူဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ကျတာရှိမယ်။ စောတာရှိမယ်။ အိပ်ပျော်သွားတာလည်းရှိမယ်။ အိပ်မက်လည်း ရှိမယ်။ စက်ရုပ်တွေ အ်ိပ်မက်မက်တယ်ကြားဖူးလား ”
“ ဘယ်ရှိမလဲကွ။ စက်ပါဆိုမှ ”
“ ဒါပေါ့ကွ။ ငါတို့က စက်မဟုတ်ဘူး။ မင်း မနက် ၈ နာရီဆို ရုံးရောက်အောင်သွားတယ်။ ညနေ ၅ နာရီတိတိ မင်းပြန်ထွက်လာသလား ”
“ ၅ နာရီခွဲလောက်ပေါ့။ တခါတလေ ၆ နာရီနီးနီးပေါ့ ”
“ ဒါဆို ဒဏ်ရိုက်လေ။ မင်း အလုပ်ချိန်ကို မတိကျဘူး။ ၅ နာရီပြန်ပါဆိုတာကို ၅ နာရီကျော်အောင်နေတယ်။ ဒါအပြစ်ပဲ ”
“ ဟာ.. မင်းလုပ်တာနဲ့ ငါတောင်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်လာပြီ။ မတူဘူးလေး။ မနက်နဲ့ ညနေ။ အသွားနဲ့ အပြန် ”
“ တူတာရှိတယ်လေကွာ။ မင်းကလူ။ မနက်ရော ညနေရော မင်းဟာ လူပဲ။ မနက်မှာ စက်ဖြစ်ပြီး ညနေမှ လူသားဆန်လို့မရဘူး။ မင်းနဲ့တော့ ခက်ပါတယ်ကွာ ”
“ ဒီတော့ ငါဘာလုပ်ရမှာတုန်း။ နောက်ကျမှ သွားရမှာလား ”
“ ခက်ပြီ။ တမင်တကာတော့ နောက်မကျနဲ့လေကွာ။ နောက်ကျသွားလဲ မင်းစိတ်မပျက်နဲ့လို့ပြောတာ။ အလုပ်မပြီးလဲ Worry မများနဲ့။ စောင့်နေကြလိမ့်မယ်။ နားလည်လား။ ပိုက်ဆံဖြတ်လည်း ဖြတ်ပေါ့ကွာ။ မင်းက လူဖြစ်လို့ လူလိုနေခွင့်ရဖို့ အဓိကပဲ မဟုတ်လား။ ပိုက်ဆံအဓိကဆို ဘိန်းရောင်းပေါ့ကွ။ တောထဲမှာနေလေ။ ပိုက်ဆံတွေ အပုံလိုက်စုထား။ နေမလား ”
“ မနေပါဘူး။ မင်းပြောတာလည်း ဟုတ်သလိုလိုပဲ ”
ပြောရင်းဆိုရင်း ကျွန်တော် အိပ်ယာထဲကို ခြေအိတ်မချွတ်သေးဘဲ ဝင်လှဲလိုက်တယ်။ ဒီကောင်က ရုံးဝတ်စုံကိုချွတ်ပြီး လူငယ်တွေပုံစံ T & Jeans ဝတ်နေတယ်။
“ မင်းဘယ်သွားဦးမလို့လဲ။ ငါနဲ့စကားပြောဦးလေကွာ ”
“ အပြင်ပြန်ထွက်လိုက်ဦးမယ်။ ငါပြောထားတာတွေ မင်းတွေးထားလေ။ အိပ်နှင့်တော့။ ငါပြန်လာမယ်။ မင်းရန်ကုန်ဆက်ဖို့ ဖုံးကဒ်ဝယ်လာမယ် ”
“ အေးကွာ ”
ဒီကောင် တံခါးစောင့်ပိတ်ပြီး ထွက်သွားတယ်။ သူ့ကို အခန်းပြတင်းကနေ လှမ်းကြည့်နေမိတယ်။ လွတ်လပ်တက်ကြွတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပဲလို့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်ကအိပ်ယာထဲနေပြီး စိတ်က လျှောက်လည်နေတဲ့ညတွေ၊ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်ဘဲ အိပ်ခဲ့ရတဲ့ညတွေ များလာခဲ့တယ်။ ဒီကောင်ပြောသွားတာတွေ တွေးရင်းနဲ့ပဲ … အိပ်မက်ထဲမှာ … ကျွန်တော်အလုပ်နောက်ကျခဲ့တယ်လေ။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 10:17 AM 34 comments
The following is the link about our Seminar from Planet Portal. Please check and be happy !
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 7:14 PM0comments
ဒီပို့စ်လေးက ကျွန်တော့်အစ်ကိုလိုခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုရဲ ရဲ့ ပင်ကိုယ်ရေးလက်ရာလေးပါ။ မူရင်းလက်ရာလေးကို scan လုပ်ပြီး တင်ထားလိုက်ပါတယ်။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 1:46 AM6comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 7:30 AM 15 comments
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 9:03 AM 16 comments
ငါတို့ရဲ့ ရာဇဝင် ( Blog Day Seminar Special Post )
ဒီအချိန်လောက်ဆို MICT ရဲ့ Conference Hall မှာ ငါ့ သူငယ်ချင်း Blogger တွေ တူညီဝတ်စုံတွေနဲ့ ရောက်နေလောက်ရောပေါ့။ လူချင်းရင်းနှီးဖို့ ခက်ခဲတဲ့ Online က သူငယ်ချင်းတွေဟာ အခုလို တိုင်းသိပြည်သိ Seminar ကြီးတစ်ခုကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ကြတော့မယ်။ သူတို့အားလုံးကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာတွေ အရာထင်အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့အတူ ငါ သူတို့နဲ့ အတူရှိနေခွင့်မရတာကိုလည်း သိပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ပြီးတော့ ငါပြန်တွေးနေမိတယ်။ အဲဒီနေ့တွေတုန်းကလေ ....
“ ကိုနေဘုန်းလတ် - ခင်ဗျားဆဲချင်လည်းဆဲတော့ဗျာ ... ကျွန်တော် Conference Hall ကြီးကို Seminar အတွက် Booking လုပ်လိုက်ပြီ ”
ဘယ်သူနဲ့မှ မတိုင်ပင်ဘဲ ငါ လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်အတွက် ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ဖုံးဆက်ပြီး အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ နာရီဝက်အတွင်းမှာ ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်တို့ MICT ရောက်လာကြတယ်။ အခန်းတွေ လိုက်ကြည့်၊ ကုန်ကျစရိတ်တွက်နဲ့ ငါ လည်းရုံးမတက်ဖြစ်ဘူးလေ။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ကိုညီလင်းဆက် က Sponsor တွေ စရှာပေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက Seminar လုပ်ဖို့ ၂ လ တိတိလိုသေးတယ်။ ရက် ၆၀ ပေါ့။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ရန်ကုန်က Blogger တွေ လူစုပြီးအစည်းအဝေးလုပ်တာ၊ တာဝန်ခွဲပေးတာ၊ မန္တလေးက Blogger တွေကို ဖိတ်ကြားဖို့တွေ၊ Seminar အတွက်ပြင်ဆင်တာတွေနဲ့ မနားကြရတော့ဘူး။ အစည်းအဝေးဆိုတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူးလေ။ ပြီးတော့ Logo ကိစ္စလို အများသဘောတောင်းရမယ့် အလုပ်တွေလည်း လုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စင်ပေါ်တက်မယ့် သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ပြောရမယ့် စကားတွေကို စာစီရသေးတယ်။ သူတို့ အဲဒီလိုအလုပ်များနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ငါ က ဘာတာဝန်မှမခံဘဲ နိုင်ငံခြားကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ငါ သွားမယ့်ညရောက်တော့ ကိုနေဘုန်းလတ်နဲ့ စကားပြောဖြစ်သေးတယ်။
“ မင်းမရှိရင် ငါတော့ တအားလျော့ပြီကွာ။ Seminar ကိစ္စ ငါ့တာဝန်ထားပါ။ မင်း စိတ်အေးအေးသာသွားတော့ ” လို့ သူပြောတယ်။ ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ငါက သိပ်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့လူ မဟုတ်ပေမယ့် အချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူတော့ ဟုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငါ ဒီရောက်တော့လည်း တတ်နိုင်သလောက် Seminar သတင်းတွေ နားထောင်နေခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပေမယ့် ရက်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲ သတ္တိရှိရှိကျင်းပမယ့် ဒီပွဲကို ငါ မြင်ချင်လိုက်တာ ... ငါ ရှိနေချင်တာ ...
တချိန်က အစည်းအဝေးတစ်ခု။ ငါကလွဲရင် အားလုံးအဲဒီမှာ ရှိနေကြမယ် ( ကိုစစ်အိမ်ထံမှ ကူးယူးဖေါ်ပြပါသည် )
ငါမျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေမိတယ်။ MICT ထဲမှာ MBS တံဆိပ်ပါတဲ့ အကျီတွေနဲ့ ငါ တို့ Blogger တွေ စည်ကားနေလောက်ပြီ။ ငါ့ကို Blogger တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်၊ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းထဲရောက်လာအောင် တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ ကိုဘလာဂေါက် တစ်ယောက် ခုချိန်ဆို သူကိုယ်တိုင်စီစဉ်တဲ့ T-Shirt ဝတ်ပြီး သူများတွေကို လိုက်စနေမှာ ငါ အသေအချာသိတယ်။ ထာဝရနောက်ကျရေးသမား ကိုညီလင်းဆက်ကတော့ ကင်မရာတွေနဲ့ အလုပ်များနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သူ့ကင်မရာတွေနဲ့ ဒီနေ့ပွဲကို မှတ်တမ်းတင်မယ်လို့ ငါ ရှိတုန်းက ပြောဖူးတယ်လေ။ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ ကိုစိုးဇေယျ၊ ကိုဖြိုး ... အခုချိန်မှာ အသေးစိတ်စီစဉ်ရမှာတွေကို စီစဉ်ရင်း ဟိုပြေးဒီပြေး ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကိုတက်စလာကတော့ သူ့ပင်ကိုယ်ဟန် မပွင့်တပွင့်ပြုံးရင်း Laptop နဲ့ Projector ဆက်ဖို့လုပ်နေမလားပဲ။ အစက သူက အဲဒါတွေ တာဝန်ယူမယ်တဲ့လေ။ Live Blog ကို အသက်သွင်းမယ့် ကိုကျော်ဇေယျလည်း အလုပ်များနေလောက်ရောပေါ့။ ငါ သူနဲ့ ရင်းနှီးခွင့် မရလိုက်ဘူး။ နောက်ပြီး ကိုမျက်လုံး၊ ကိုစစ်အိမ်၊ ကိုချစ်စမ်း ... ဘယ်သူမှ ခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေရမှာ မဟုတ်ဘဲ အလုပ်ရှုပ်နေကြမှာပါ။ ငါ မြင်ယောင်နေမိတယ်။ မိန်းကလေးထဲက မဘာညာနဲ့ မမီ၊ ပင့်ဂိုး၊ စိတ်ကူး ...တကယ်ပဲအားလုံးစုံနေကြပြီလား။ ငါ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ငါ ခင်တဲ့လူတွေက ငါ မြင်ချင်တဲ့ပွဲကို လုပ်ကြတော့မယ် ... ဒါပေမယ့် ငါက အဝေးမှာ ...
နောက်တစ်ခု သတိရမိတာက ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြီးကတည်းက ငါတို့အကျင့်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယပိုင်း။ အစည်းဝေးပြီးတိုင်း တနေရာရာ ပြောင်းထိုင်ပြီး စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့။ ပိုပြီး ရင်းနှီးစေသလို သိပ်လည်း ပျော်စရာကောင်းတယ်။ မောလာသမျှတွေ ပျောက်စေခဲ့တယ်။ Blog Times ဆိုတဲ့ သတင်းစာလေးလဲ အဲဒီဒုတိယပိုင်းတွေကနေ မွေးဖွါးခဲ့တယ်လေ။ ဒီနေ့ရော ... ဒုတိယပိုင်းရှိသေးလား ... ရှိသင့်တာပေါ့။ သူတို့အားလုံး ပင်ပန်းလှပြီ။ မနက်ပိုင်းမှာ မောခဲ့တာတွေ၊ လွဲခဲ့တာတွေ စကြ၊နောက်ကြနဲ့ MBS ကြီးတည်မြဲဖို့ ခွက်တိုက်ဆုတောင်းမယ့် ဒီပွဲကိုလည်း ငါလွဲခဲ့ရပြန်ပြီ။
why-do-we-blog ရှေ့က မောင်ပွတ်
ငါနာရီကြည့်ပြီး ဒီအချိန်လောက်ဆို အခမ်းအနားစတော့မယ်လို့ တွေးနေမိတယ်။ သူတို့ဟာ ခမ်းနားတဲ့ ခမ်းမကြီးထဲမှာ နေရာယူနေကြလောက်ရောပေါ့။ ငါကတော့ ငါ့နေရာလို့ ပြောလို့ရတဲ့ အိပ်ခန်းကျဉ်းထဲက ကွန်ပြူတာစားပွဲမှာထိုင်၊ Live Blog အတွက် F5 ပေါ်လက်တင်ရင်း အသင့်စောင့်နေတယ်။ တကယ်တော့ ငါ့အလုပ်နားရက်က တနင်္ဂနွေမှပါ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်ချင်လို့ ငါ စနေနဲ့ ရက်လဲယူပြီး စောင့်နေတာလေ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကို ငါလွမ်းနေတယ်။ ဒီလူတွေရော .. ငါ့ကို အမှတ်ရနေစဲလား .... နောက်ပြီး Coffee King နဲ့ Service + ၊ ၁၉ လမ်းက ညနေခင်းတွေ ... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ... ငါတို့သမိုင်းမှာ ဒီနေ့ကတော့ တကယ့်ကို ရာဇဝင်တွင်စေခဲ့ပြီလေ။
MBS အဖွဲ့ကြီးနှင့် Seminar ဖြစ်မြောက်အောင် အထူးကြိုးပမ်းကူညီပေးခဲ့ကြသော ရပ်ဝေး၊ ရပ်နီးမှ ဆရာသမား၊ သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေများအားလုံးကို အထူးပင်းလေးစားလျက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 10:43 AM 19 comments